အဆုတ် ထဲက အဆိပ်အတောက်တွေ ကို ဂျင်းနဲ့ ဘယ်လို ဖယ်ရှားမလဲ? – Shwe Likes
အဆုတ် ထဲက အဆိပ်အတောက်တွေ ကို ဂျင်းနဲ့ ဘယ်လို ဖယ်ရှားမလဲ?
Shwe | April 12, 2020 | Health | No Comments
လူ တစ်ယောက် အသက်ရှင်ဖို့ အတွက် အရေးကြီးတဲ့ အင်္ဂါ အစိတ်အပိုင်းတွေ ထဲမှာ အဆုတ် လည်း ပါဝင်နေပါတယ် …. ။ ဒါ့ကြောင့် အဆုတ် ကျန်းမာရေးက အရေးကြီးပြီး အဆုတ် ကို သန့်စင်အောင် ထားရှိဖို့ လိုအပ်ပါတယ် …. ။
အထူးသဖြင့် ဆေးလိပ် သောက်တတ်သူတွေ ဆိုရင် အဆုတ် ကို သတိထားပြီး အဆုတ်ထဲက အဆိပ်အတောက်တွေကို ဖယ်ရှားပေးသင့်ပါတယ် ….. ။
ဂျင်း ကို အသုံးပြုပြီး အဆုတ်ထဲက အဆိပ်အတောက်တွေကို ဖယ်ရှားနိုင်ပါတယ်။ ၂၀၁၂ ခုနှစ်က တွေ့ရှခဲ့တဲ့ သုတေသနအရ ဂျင်းမှာ အဆုတ်ကင်ဆာ ရောဂါကိုလည်း ကာကွယ်နိုင်စွမ်း ရှိပါတယ် ….. ။
အဆုတ် ကို သန့်ှရှင်းဖို့ ဂျင်းရေနွေးကြမ်း
မီးဖိုပေါ်မှာ ရေနွေးကို ပွက်ပွက်ဆူအောင် တည်လိုက်ပါ။ ပြီးရင် ဂျင်းကို ပါးပါးလှီးထားပါ။ လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ ဇွန်းစာလောက်ကို ရေနွေး ၁ ခွက်ခွဲစာလောက်ထဲ ခပ်လိုက်ပါ ….. ။ ၅ မိနစ်ကနေ ၁၀ မိနစ်ကြားလောက် ထားလိုက်ပါ …. ။ ဂျင်းတွေ ဖယ်လိုက်ပြီး သံပုရာ သီးလေး အနည်းငယ်ညှစ်ပြီး သောက်လိုက်ပါ ….. ။
ဟင်းချက်တိုင်းလည်း ဂျင်းကိုထည့်ပြီး ချက်ပြုတ်ပေးပါ ….. ။ ဒီလို နည်းလမ်းတွေက ကိုယ်ခံအားကို တက်စေပြီး အဆုတ်ထဲက အဆိပ်အတောက်တွေကို ဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါတယ် ….. ။
မှတ်ချက်။ …. ။ သွေးတိုးရှိသူတွေ၊ နှလုံးရောဂါ ရှိသူတွေကတော့ ဂျင်းကို အလွန်အကျွံ မစားသင့်ပါဘူး နော် ….
လူ တဈယောကျ အသကျရှငျဖို့ အတှကျ အရေးကွီးတဲ့ အင်ျဂါ အစိတျအပိုငျးတှေ ထဲမှာ အဆုတျ လညျး ပါဝငျနပေါတယျ …. ။ ဒါ့ကွောငျ့ အဆုတျ ကနျြးမာရေးက အရေးကွီးပွီး အဆုတျ ကို သနျ့စငျအောငျ ထားရှိဖို့ လိုအပျပါတယျ …. ။
အထူးသဖွငျ့ ဆေးလိပျ သောကျတတျသူတှေ ဆိုရငျ အဆုတျ ကို သတိထားပွီး အဆုတျထဲက အဆိပျအတောကျတှကေို ဖယျရှားပေးသငျ့ပါတယျ ….. ။
ဂငျြး ကို အသုံးပွုပွီး အဆုတျထဲက အဆိပျအတောကျတှကေို ဖယျရှားနိုငျပါတယျ။ ၂၀၁၂ ခုနှဈက တှရှေ့ခဲ့တဲ့ သုတသေနအရ ဂငျြးမှာ အဆုတျကငျဆာ ရောဂါကိုလညျး ကာကှယျနိုငျစှမျး ရှိပါတယျ ….. ။
အဆုတျ ကို သနျှ့ရှငျးဖို့ ဂငျြးရနှေေးကွမျး
မီးဖိုပျေါမှာ ရနှေေးကို ပှကျပှကျဆူအောငျ တညျလိုကျပါ။ ပွီးရငျ ဂငျြးကို ပါးပါးလှီးထားပါ။ လကျဖကျရညျဇှနျး ၁ ဇှနျးစာလောကျကို ရနှေေး ၁ ခှကျခှဲစာလောကျထဲ ခပျလိုကျပါ ….. ။ ၅ မိနဈကနေ ၁၀ မိနဈကွားလောကျ ထားလိုကျပါ …. ။ ဂငျြးတှေ ဖယျလိုကျပွီး သံပုရာ သီးလေး အနညျးငယျညှဈပွီး သောကျလိုကျပါ ….. ။
ဟငျးခကျြတိုငျးလညျး ဂငျြးကိုထညျ့ပွီး ခကျြပွုတျပေးပါ ….. ။ ဒီလို နညျးလမျးတှကေ ကိုယျခံအားကို တကျစပွေီး အဆုတျထဲက အဆိပျအတောကျတှကေို ဖယျရှားပေးနိုငျပါတယျ ….. ။
မှတျခကျြ။ …. ။ သှေးတိုးရှိသူတှေ၊ နှလုံးရောဂါ ရှိသူတှကေတော့ ဂငျြးကို အလှနျအကြှံ မစားသငျ့ပါဘူး နျော ….
ကျွန်တော်/ကျွန်မ တို့ အတူနေ ဆက်ဆံရင်း COVID-19 ကူးစက် နိုင်သလား….?
အဖြူဆင်းတဲ့အရောင် ဒါမှမဟုတ် ဓမ္မတာသွေးအရောင် ကတဆင့် သိနိုင်မယ့် သင့် သားအိမ်ကျန်းမာရေး
မျက်စိအား ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာပြီး မျက်မှန်မလိုတော့အောင် မျက်မှန်လွတ် တဲ့ အလွယ်ကူဆုံး နည်းလမ်းလေး